उर्मिलाले थाकेपछि अन्तिम पटक आफ्नी सहकर्मी साथीलाई यसो भनेकी रहेछिन् ! – Karnalikhabar
उर्मिलाले थाकेपछि अन्तिम पटक आफ्नी सहकर्मी साथीलाई यसो भनेकी रहेछिन् !
काठमाडौं । आरोपीलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि स्थानीयले गरेको कारवाहीमा एक जना प्रहरी जवानको मृत्यु भयो । मोरङको लेटाङमा आइतबार साँझ स्थानीयवासी र प्रहरीबीच घटना हुँदा एक महिला प्रहरीको मृत्यु भएको छ । कोशी अञ्चल अस्पतालले महिला प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो । उनकै सहकर्मी साथीले भनिन् ‘उर्मिलाको हात ता’नेर भी’डबाट अघि बढाउने प्रयास गरें। उनि था’किसकेकी थिइन्। भी’डले मबाट उनलाई ता’ने’र लग्यो।
मलाई नि भुईमा प’ल्टा’यो मलिन स्वरमा घटनाबारे उनकै एकजना सहकर्मीले भनिन्। उनी परिवारकी एक्ली छोरी थिइन् । उनका दाई र श्रीमान दुवै प्रहरी सेवामै कार्यरत छन् । एक्ली बहिनीको निधनले भुवन निकै दुखी छन् । उर्मिलाका दाई भुवन विराटनगरको बखरी प्रहरी चौकीमा सहायक निरीक्षक छन् ।
उर्मिला र म पनि मि’सियौं। मसँग ह’ति’यार पनि थियो। भी’डले हामीलाई ल’खे’ट्न थाल्यो।’ भी’डबाट जोगिन उनीहरुले अन्तिमसमयसम्म प्रयास गरेका थिए। उर्मिला अन्य जस्तो ह’ट्टा’क’ट्टा थिइनन् । कहिलेकाही म’हि’ना’वारी हुदाँसमेत उनलाई अ’त्य’न्त गा’ह्रो हु’ने ग’रेको सँगै काम गरेको साथीहरु बताँउछन्। यसबीच अर्की महिला प्रहरी जवान मनिता राई पनि विद्यालय नजिकको एक शौचालयमा करिब ३ घण्टा लु’केर बसेकी थिइन्। उनी पनि भी’डबाट भा’ग्दै शौचालयसम्म पुगेकी थिइन्। उर्मिला र उनका केही सहकर्मीमाथि राति करिब साढे आठ बजे खन पुग्यो।
थकित उर्मिलाको हा’त पक्रेर उनकी सहकर्मीले विद्यालयको गेटबाट करिब ५ सय मिटरदेखि एक किलोमिटर परसम्म घि’सारिन्। उनले भनिन्, ‘हामी निक्कै था’केका थियौं। उर्मिलाले हात न’छो’ड्नु है दिदी भनिरही। मैले बल लगाएर तान्ने प्रयास गरिरहे। एकाएक आठ दस जनाको हु’लले हामीमाथि जाइलागे। दुवैजना ना’लामा ख’स्यौं। हामी जीवनरक्षाका लागि हा’र गु’हार ग’रि’रह्यौं।’ आ’क्रो’शित भी’डले उर्मिलामाथि नि’र्म’म् प्र’हा’र ग’रि’सकेको थियो। एक सासमा सम्झिदै उनी भन्छिन्, ‘राती भी’डले उर्मिलालाई श’हि’द बनाइसकेको भन्दै थियो।
मलाई चाहिँ नजिकैको जंगलमा लगेर सहिद गर्ने भन्दै तान्दै थियो। सायद त्यो घरको महिलाले मलाई आश्रय नदिएको भए आज म पनि जंगलमा मृ’त अवस्थामा भेटिन सक्थें।’ त्यसपछि ती महिला प्रहरीले ना’ला नजिक घरमा जीवनका आ’शा देखिन् । एक अधवैंशे महिलासमक्ष हा’र गु’हार गरिन्। आफू रानी विराटनगरबाट आएको बताइन्। ती महिलाले उर्मिलाकी सहकर्मीलाई घरमा लगेर ह’ति’यार लु’का’एर अर्को लुगा लगाउन दिइन्। त्यसपछि उनी आफ्नो ज्या न जो’गा’उन सफल भएकी थिइन्। अर्कोतर्फ, सधैझैं राती उर्मिला ड्युटी सकेर आउँदा अबेर हुन्छ भन्दै घरबेटीले आइतबार राती पनि मुलगेट सधैं झैं खुल्लै राखेका थिए।
मलिन स्वरमा उर्मिला बस्दै आएका घरबेटी कुन्दन लामाले भने, ‘हामी त एकाएक विहान खबर सुन्दा पो झ’संग भयौं। सधै ड्युटी सकेर आउँदा करिब १०: ३० बज्ने गर्थ्यो। आउँदै होलिन् भनेर ढोका खुल्लै छाडेका थियौं। तर कहिल्यै नफर्कने गरी गएको पत्तै भएन।’ लामाका अनुसार गत वर्ष बैशाखमा खोटाङकी उर्मिलाको उदयपुरका प्रहरी जवान नवीन श्रेष्ठसँग विवाह भएको थियो। विवाह पश्चातसमेत राम्ररी दुवै जनाले समय विताउन पाएका थिएनन्। उर्मिलाको कार्यक्षेत्र विराटनगर भएपनि नवीन इलाममा कार्यरत रहेका थिए।
गएको तीन साता अघि मात्रै नवीन विराटनगर आएका थिए। लामा सम्झन्छन्, ‘तीन साता अघि उनको श्रीमान् आएका थिए। दुवै जना कम र नम्र बोल्ने स्वभावका थिए। केहीदिन बसेपछि दुवैजना इलाम जाने तरखरमा थिए।’ आइतबार पनि विहानबाट कार्यालयको गेटमा ड्युटीमा बसेकी उर्मिला आफ्नो ड्युटी सकेर त्यसतर्फ गएकी थिइन्। उर्मिलापनि पछिल्लोसमय श्रीमानसँग इलाममा ड्युटी मिलाउने क्रममा रहेकी थिइन्। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका शिक्षकलाई का’लो मो’सो दलेर बजार घुमाउन चाहेका स्थानियले प्रहरीले त्यसो गर्न नदिएपछि आ’क्रो’शित भएका हुन् । उर्मिलाको घाँटीमा चो’ट ला’गे’को थियो । उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै उनको निधन भएको थियो । देश संचारबाट साभार
अघिल्लो - कृष्णबहादुर महराका स्वकीय सचिवले गरे पार्टी परित्यागको घोषणा
प्रतिगमनको खतरा टरेको छैन : अध्यक्ष प्रचण्ड - पछिल्लो